नयाँ वर्षमा शान्ति र समृद्धिको कामना ! – इन्सेक
नयाँ वर्षमा शान्ति र समृद्धिको कामना !
काठमाडौँ ०७६ वैशाख १ गते
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ वर्ष २०७६ ले समृद्ध देश निर्माणका लागि थप ऊर्जा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् ।
२०७५ साल सङ्घीय शासन प्रणालीअनुरुपको कानुन बनाउन सफल भएको र सुशासन तथा समृद्धिको मार्गमा उन्मुख रहन सफल भएको उनले उल्लेख गरेकी छन् ।
राष्ट्रपतिले शुभकामना सन्देशमा लेखेकी छन्-‘हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय संकल्प ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को साझा लक्ष्य प्राप्त गर्न २०७६ साल महत्वका साथ अगाडि बढ्नेछ । ठूलो सङ्घर्षबाट मुलुकले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक उपलब्धिलाई सुशासन र समृद्धि मार्फत सुदृढ बनाउन नयाँ वर्षले सबैमा थप उर्जा प्रदान गरोस् ।’
नयाँ वर्ष २०७६ मुलुकमा समृद्धि र दीगो शान्तिका साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको वर्ष बन्न सकोस् भन्ने कामना पनि उनले गरेकी छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन्-'समृद्धिको अर्को पूर्वशर्त शान्ति हो । वितेको वर्षमा मुलुकले राजनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण उपलव्धिहरु हासिल गर्‍यो ।'
उनले सबैखाले अतिवाद, अशान्ति, आतङ्क र गडबडीबाट मुलुकलाई छिट्टै मुक्त गराइने बताएका छन् ।
'लामो द्वन्द्व र सङ्क्रमणकाल अन्त्य गरेर बल्ल स्थायित्वको बाटोमा हिंड्न लागेको मुलुकमा अर्को हिंसाको दुष्चक्र किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन । शान्तिपूर्ण रूपमा गरिने विरोध र असहमतिलाई हाम्रो संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ । तर, अवाञ्छित प्रतिगामी प्रयासहरु र संविधान विरोधी गतिविधिहरु कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ । यसलाई बुझेर पनि बुझ पचाउने काम नगर्न, राजनीतिक रङ्ग दिएर हिंसालाई उचित नठहर्‍याउन र यस सम्बन्धमा दोहोरो मापदण्ड र लोकरिझ्याइँको बाटो नअपनाउन म सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु ।'-शुभकामना सनदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।